Accueil > Gazetin'ny nosy > Madame Tidiane : Nanodinkodina 10 miliara ariary tao amin’ny Atitany
Madame Tidiane : Nanodinkodina 10 miliara ariary tao amin’ny Atitany
Nalaza be ny raharaha Claudine Razaimamonjy izay mpandraharaha migadra 10 taona asa anterivozona ankehitriny. tamin’ny taona 2016 tao Mahamasina. Izany dia noho ny raharaha Ambohimahamasina izay vola 396 millions ariary na 2 miliara ariary eo ho eo. Nantsoina hoe “subvention exceptionnelle” ny tetikasa namaritana izany ka nentina hanamboarana foto-drafitrasa amin’ny kaominina maro manerana ny nosy. Ny tao Ambohimahamasina ao Ambalavao Tsienimparihy ao Matsiatra Ambony no nahitana manokana io fanodinkodianana vola io. Marihina nefa fa mbola nisy ihany koa ny tetikasa hafa izay nanaovana fanodinkodinam-bola toa izao nitranga tao Ambohimahamasina izao tamin’ny toerana maro manerana an’i Madagasikara izay mbola andrasana ny fitsarana azy.
Nisy olona maro tafiditra amin’ity raharaha ity nefa dia mbola olona vitsy ihany no nigadra ka nahagaga ihany ny mpanaraka ny raharaha izany. Ny tena nahagaga sy nampitalanjona ny mpanaraka ny raharaha aza dia ny fahitana ny minisitry ny Atitany Solonandrasana Olivier Mahafaly izay tompon’andraikitra voalohany amin’iny raharaha iny nefa tsy nigadra na voarohirohy fa lasa vavolombelona indray. Ny tenin’ny ben’ny tanàna Tsabo Pierre izay nigadra 5 taona asa anterivozona nefa dia noteren’ny minisitra hanao ny famindram-bola ao amin’ny kaonty iray tamin’ny fanadihadiana nataon’ny IGE na ny (Inspecteur général de l’Etat) azy dia nanambara fa baiko avy amin’ity minisitra ity no nahatonga azy nanao ny famindram-bola iny. Tsy vitan’ny baiko ihany fa niharo fandrahonana ihany koa. Marihina fa niparitaka tamin’ny serasera teto Madagasikara izany fanambaran’ny ny ben’ny tanàna izany.
Ankehitriny indray ary dia miseho masoandro indray ny raharaha “Madame Tidiane”. Regisseur de recette” na mpandray ny volam-panjakana mahakasika ny fanomezana « visa » na fahazoan-dalana hiditra na hivoaka an’i Madagasikara, sy « carte de resident » na karatrin’ny fahazoana mipetraka eto Madagasikara hoan’ny vahiny maniry hipetraka eto Madagasikara. Voakasika amin’izany ireo izay mpitsangatsangana na ireo izay mieritreritra ny hanorim-ponenana sy handraharaha.
Voalaza ary araka ny loharanom-baovao azonay izay marimpototra fa misy vola 10 miliara ariary no nahodinkodina tao amin’ity ministeran’ny atitany ity nanomboka ny taona 2016 ka hatramin’ny taona 2018. Fantatra koa fa any Itaosy any no nandrotsahana io vola io. Isan’ny “regisseur de recette” voalaza fa nanao izao fanodinkodianana izao ity Madame Tidiane ity. Izany rehetra izany dia tamin’ny andro naha minisitra an’ingahy Solonandrasana Olivier Mahafaly tao amin’ny Atitany sy ny fitsinjarampahefana tamin’izany fotoana izany ary naha praiminisitra azy sady minisitry ny atitany koa.
Hijery fotsiny ny raharaha ve ny fanjakana. Fantatra fa nandositra ity Madame Tidiane ity. Any amin’ny faritra avaratrin’ny nosy iny no ahitana azy hoan’ireo izay mahafantatra azy. Mieritreritra ny hitsoaka an’i Madagasikara koa izy raha ny loharanom-baovao hatrany satria efa misy sambo koa fananany sy ny mpiara miasa aminy efa mivonona amin’izany any amin’ny faritr’i Nosy-be iny.
Koa satria miady mafy amin’ny kolikoly sy ny fanodinkodinana volam-panjakana ny fanjakana ankehitriny. Hojerena fotsiny ve ity raharaha ity ? Fantatra koa raha ny loharanom-baovao fa efa mandoa volabe amin’ny manampahefana fantany fa tokony hiaro azy Madame Tidiane ity.
Azo lazaina fa volabe mihoatra lavitra ny raharaha Claudine Razaimamonjy no mahavoarohirohy an’i Madame Tidiane ity ary manampahefana ambony sy mpiasam-panjakana ambony ao amin’ny ministeran’ny atitany sy fitantanambola no mety ho voarohirohy amin’ity raharaha ity.